Mayelana NATHI - Xinxiang ukuvuvukala Electronic Technology Co., Ltd.
Xinxiang ukuvuvukala Electronic Technology Co., Ltd.itholakala endandeni engaphandle yeXinxiang tech tech Zone, ezungezwe amakolishi namayunivesithi, ucwaningo lwesayensi nomoya wezemfundo. Njengamanje, inkampani inabasebenzi abangama-60, okukhona kubo amathalente ezesayensi nezobuchwepheshe angaphezu kwe-35%. Ububanzi bayo bebhizinisi buhlanganisa i-R & D nokuthengiswa kwemishini yamarobhothi ehlakaniphile, imikhiqizo kagesi, izinsimbi ezihlakaniphile namamitha, izinzwa, imishini yezolimo nezinye izinsimbi; ukuthuthukiswa kwemikhiqizo kagesi kanye nesoftware yokusebenza kanye nezinsizakalo zokubonisana nezobuchwepheshe; kanye nokusebenza kokuhweba kwangaphandle nokungenisa kwamanye amazwe.
Isisekelo se-R & D sihlanganisa iBeijing, iShanghai, iNanjing, iShenzhen neGuangzhou, ngenethiwekhi yokuthengisa ezweni lonke. Le nkampani inethimba lenkonzo yokuthengisa esezingeni eliphakeme elimboza izwe lonke, elihlinzeka ngamasevisi aphelele, aqaphelayo futhi asheshayo kumakhasimende nganoma yisiphi isikhathi. Eminyakeni yamuva, inkampani yethu ilungiselela ukwakha iqembu lokucwaninga nokuthuthukiswa kwesikhulumi esihlakaniphile. Njengengqalabutho embonini kagesi, sithembele kumqondo wokwakhiwa kwezakhiwo wokuhlanganisa ukuphathwa kwamandla nobuchwepheshe bedijithali, sakhe isixazululo esiphelele sokuphathwa kwekhwalithi yamandla. Lezi zixhumanisi ezintathu zokuphathwa kokuhlaziywa kokutholwa zakha indawo evaliwe, ukuhlinzeka ngezixazululo nemikhiqizo yezinhlelo zamandla kanye namabhizinisi asebenzisa ugesi Sizokwakha indawo ephehla ugesi ephephile futhi ehlanzekile ukuvikela amandla aluhlaza omhlaba.
Njengamanje, inkampani inezinhlu ezinhlanu zemikhiqizo yezinkanyezi, kufaka phakathi isilawuli esinxephezelayo samandla kagesi, inkinobho eyinhlanganisela kanye nomshini we-thyristor, i-capacitor ehlakaniphile nethuluzi lenethiwekhi, konke okwenziwa ngokuzimela nokukhiqizwa yinkampani yethu, Le nkampani inendawo yokusebenzela yesimanje, imishini yokuhlola esezingeni eliphakeme, imishini yokuhlola yokuhambisana kagesi, i-SMT othomathikhi ye-chip Assembly kanye neplatifomu yokuthuthukiswa kwehardware, kanye nokuthuthukiswa kwesikhunta nethimba lokuklama, okungaqinisekisa ngokuphelele ukulawula okuzimele kokukhiqizwa okuhambisanayo kwemikhiqizo emisha, nokusebenza kwekhwalithi futhi ukuphepha kungalawulwa ngokuphelele endaweni, ngakho-ke inkampani yethu inezayo Ngaphezu kokuthola amalungelo azimele wokungenisa nokuthekelisa, imikhiqizo yomkhiqizo nayo ingasiza amakhasimende aphesheya kwezilwandle ukuthi azuze ukukhiqizwa kwe-OEM ne-ODM. Ngo-2020, inkampani futhi inesakhiwo esihlelekile semakethe yomhlaba. Ngaphezu kokuthekelisa imikhiqizo yamaShayina emhlabeni, iphinde yasungula ihholo lombukiso womkhiqizo wamazwe omhlaba. Ngokususelwa ekungenisweni kweChina kweminye imikhiqizo emele amazwe, ingabona ukukhuthazwa noma ukusebenza nokugcinwa kwemikhiqizo yamanye amazwe kuziteshi zasekhaya Qedela umsebenzi wokuhweba wokungenisa nokuthumela ngaphandle.
Xhumana nathi, sizokwazi ukusebenzisana ukudala okukhazimulayo.
Ikheli:Igumbi 1401, iyunithi 1, ukwakha u-3, uNombolo 99, iringi engaphandle laseNingizimu, i-high tech Zone, iXinxiang City, iSifundazwe saseHenan